ပါတီမှာ ပျော်ကြမယ်၊ သောက်ကြမယ်။ - ဒိုးမယ်
ပျော်စရာ TGIF နေ့လေးမှာ ဘယ်တွေလုပ်ဖို့ စဉ်းစားထားပါလဲ။ ပျော်စရာ ကောင်းပြီး အပီ ရှိတ်လို့လည်းရ၊ ဘော်ဒါတွေနဲ့လည်း အပြီကဲလို့ရတဲ့ နေရာလေး ဖြစ်တဲ့ ပါတီသွားမယ်ဆိုလည်း ကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်တွေထဲမှာ ပါတာပါပဲနော်။
ပါတီဆိုတာကတော့ ကိုယ်သိတဲ့ လူတွေနဲ့ရော၊ ကိုယ်မသိတဲ့ လူတွေနဲ့ပါ တစ်ရင်းတစ်နှီး ပျော်ပျော်ကြီး ဆင်နွဲကြတဲ့ နေရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ပါတီဆိုတာနဲ့ စားသောက်စရာ၊ တေးဂီတများ၊ အကအခုန်များနှင့် အခြားသော ဖျော်ဖြေတင်ဆက်တွေက တပါတည်းကပါထားပြီးသားပါ။ ပါတီတွေက ပုံစံ အမျိူးမျိုးနဲ တွေ့မြင်ရတတ်ပါတယ်။ အကပါတီ၊ ကမ်းခြေပါတီ၊ ဥယျာဉ်တွင်း ပန်းခြံ နှင့် ရေကူးကန်ပါတီ အစရှိသဖြင့် ပုံစံမျိုးစုံ နဲ့ပါတီတွေရှိပါတယ်။ ပါတီအများစုကိုတောာ့ စားသောက်ဆိုင်၊ ညကလပ်များနှင့် ဘားများတွင် အများစု ကျင်းပလေ့ ရှိကြပါတယ်။ တချို့သောပါတီတွေကတော့ ဝင်ကြေးပေးဖို့လိုအပ်ပေမဲ့ တစ်ချိူ့ပါတီတွေကတော့ စီစဉ်သူ ဘက်ကနေ ဝင်ကြေးအခမဲ့ ပေးတတ်တာပါတယ်။
ပါတီ နဲ့ သောက်စရာဆိုတာ ခွဲလို့မရတဲ့ အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ပါတီမှာဆင်နွဲကြတဲ့ လူအများစုကတော့ ပါတီိမှာ ပိုုပြီး ပျော်နိုင်အောင်၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ လျော့နိုင်အောင်ဆိုပြီး အဖျော်ယမကာ များကို သောက်သုံးတတ်ကြပါတယ်။ ပါတီတွေမှာ လူကြိုက်အများဆုံး သောက်စရာတွေကတော့-
ဘီယာတွေကတော့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အတော်များများနှင့် ဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်ပွဲတွေမှာ လူအကြိုက်အများဆုံး သောက်စရာတွေပဲ ဖြစ်ပြီး ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှာ တစ်ခုအဖြစ် လက်ခံထားကြပါတယ်။ ဘီယာကဆိုရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ တတိယအသောက်များဆုံး သောက်သုံးစရာ အဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ မိမိရဲ့ အကြိုက်နှင့် ယမကာ ပါဝင်နှုန်းပေါ်မူတည်ပြီး ရွေးချယ်စရာ တံဆိပ်မျိုးစုံ ရှိလှပါတယ်။
ရမ်တွေကတော့ အမျိုးအစားအများကြီး ရှိပြီး အပျော့စား ရမ်တွေကိုတော့ ကော့တေး ဖျော်စပ်ရာမှာ အသုံးပြုပြီး ထိပ်တန်းရမ်တွေကိုတော့ ဒီိတိုင်း သောက်သုံးတာဖြစ်ဖြစ်၊ ရေခဲ ရောပြီး ဖြစ်ဖြစ် သောက်ဆုံးတတ်ကြပါတယ်။
ဖော့ကာနှင့် နှင့် ဂျင်
အရောင်အဆင်း ကြည်လင်လှတဲ့ ဖောကာနှင့် ဂျင် အရက်တို့ကိုတော့ ဘာလီ၊ ဂျုံ၊ အာလူးတို့ပို ကစော်ဖောက်ပြီးပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ဖော်ကာ ကိုဖျော်စပ်လို့အကောင်းဆုံး ယမကာ အနေနဲ့ သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ ဂျင်တွေရဲ့ အရသာအနေနဲ့ကတော့ သစ်ကြံပိုးအနံ့နဲ့အရသာ၊ လိမ္မော်ခွံ အနံ့နဲ့အရသာ အစရှိသဖြင့်အနံ့အရသာ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ရုရှားရဲ့ ဗောကာကိုတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ နှစ်ခြိုက်စွာ သောက်သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ လူကြိုက်အများဆုံးဗောကာတွေကတော့ ဂျင်းအရသာ ဗောကာ၊ သစ်သီးဖောကာနှင့် ပျားရည် ဗောကာ အစရှိသဖြင့် စုံလင်လှပါတယ်။
ကော့တေးနှင့် မော့တေးကတော့ ပါတီတွေမှာ မပါမဖြစ် အရေးပါလှတဲ့ သောက်စရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကော့တေးဆိုတာကတော့ ယမကာနှင့် အခြားသော ပါဝင်ပစ္စည်း အနည်းဆုံ၂ ခု၊ ၃ ခုခန့်လောက်ကို ရောပြီး ဖျော်ဆက်ထားတဲ့ အဖျော်ယမကာ တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
bloody Mary, Martini, black Dog, Shirley Temple, Sex on beach အစရှိတဲ့ ကော့တေးတွေကတော့ လူကြိုက်များလှတဲ့ ကော့တေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကော့တေးနှင့် မော့တေးကတော့ စတိုင်နှင့် ဖျော်စပ်ပုံခြင်းတူညီလှပေမဲ့ မော့ တေးမှာတော့ ယမကာ ပါဝင်ဖျော်စပ်မထားတဲ့ ကွာခြားချက်တစ်ခု ပဲရှိပါတယ်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံ ရှန်ပိန်ဒေသမှ ထုတ်ယူထားတဲ့ စပျစ်သီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ စပါကလင် ဝိုင်ကတော့ ရှန်ပိန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ရှန်ပိန်ကို အောင်ပွဲခံ အခမ်းအနားများနှင့် ဂုဏ်ပြူ ပါတီများတွင် အများဆုံးသောက်သုံးလေ့ရှိပါတယ်။
ရိုမန့်တစ်အဆန်ဆုံးသောက်စရာ အဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဝိုင်ကတော့ စပျစ်နှင့် ထုတ်လုပ်ပြီး နေ့ထူးနေ့မြတ်များနှင့် အခမ်းအနားများတွင် အများဆုံးသောက် လေ့ရှိပါတယ်။ ရှန်ပိန်နှင့် ဝိုင် များကတော့ ပါတီတွေမှာ ကျော်ကြားလှတဲ့ သောက်စရာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာအနှံ့ မှာ တွင်ကျယ်စွာ သောက်သုံးလေ့ရှိတဲ့ ဝီစကီကတော့ အမျိုးအစားအများကြီး နှင့် ပုံစံ မျိုးစုံ ရှိလှပါပြီး ဘားများ၊ ပါတီများနှင့် ကလပ်များတွင် အများဆုံးသောက်သုံးတတ်ကြပါတယ်။ စကော့တလန်နိုင်ငံထုတ် အကောင်းစား ဝီစကီ တစ်ခွက် ကို ရေခဲအေးအေးနဲ့ တစ်ကျိုက်သောက်လိုက်ရုံနဲ့ ဖိန်းဖိန်းရှိန်းရှိန်း နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက သွေးတွေကို ပူသွားစေမှာပါ။
ယခုတလောမှာ အဖျော်ယမကာတွေကို ခွန်အားဖြည့် အချိုရည်တွေနဲ့ ရောစပ်ပြီး သောက်သုံးလာတာကို တွေ့မြင်ရပါတယ်။ ဒီလိုသောက်သုံးတာက ကျန်းမာရေးပို ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး ဗောကာ နှင့် အခြားသော အဖျော်ယမကာ တွေနဲ့ တွဲပြီး သောက်သုံးမယ်ဆိုရင်လည်း မသင့်တော်လှပါဘူး။ ကဖင်းနှင့် ရောစပ်ပြီး သောက်မယ်ဆိုရင်လည်း နှလုံးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
ပါတီမှာ အကြာကြီး ပျော်ပြီး သောက်မယ်ဆိုရင်တော့ ပထမဆုံး ကိုယ်သောက်နိုင်တဲ့ ယမကာ ပမာဏကို သိထားပါ။ အသောက်ချည်းပဲ မသောက်ပဲ အမြည်းပါတွဲစားခြင်းဖြင့် ယမကာ ပမာဏကို သွေးတွင်း အချိန်တိုအတွင်း ရောက်ရှိခြင်းမှ အကာကွယ် ပေးပါတယ်။ အမျိုးအစားကောင်းတဲ့ အဖျော်ယမကာကိုသာ ရွေးချယ်သောက်သုံးပါ။ ကိုယ်တခါမှမသောက်ဖူးတဲ့ အရက်ကို အစာအိမ်ထဲမှာ အစာမရှိပဲ မသောက်ပါနဲ့ ။ ဒီအချက်လေးတွေကို သတိထားပြီး သောက်မယ်ဆိုရင်တော့ ပျော်စရာ သောကြာနေ့ ညလေးပြီးလို့ နောက်နေ့ မနက်မှာတောင် ခေါင်းမကိုက်စေတော့ပါဘူးနော်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဒီညမှာ အောက်ကဖော်ပြထားတဲ့ ပါတီတွေမှာ သွားကဲလို့ရပါတယ်နော်။
Wine and Jazz night event
No.80 Avene, Yangon.
No.40 Natmauk Road, Yangon.
May 12 at 8 PM to May 13 at 11:59 PM
No.(81), 50th street(Middle Block Yangon.
Happy Friday Night party
No.330, Ahlone Road, Yangon.
ဆက်စပ် အကြောင်းအရာများ >>TGIF